Hiran State - News: Mareykanka iyo Yurub oo sheegay ineysan Soamliya ka jirin wax dowlad ah oo ay fashilantay dowladii kumeel gaarka aheyd.
Mareykanka iyo Yurub oo sheegay ineysan Soamliya ka jirin wax dowlad ah oo ay fashilantay dowladii kumeel gaarka aheyd.
USA:-Dowlada Mareykan oo ka mid ah wadamada arimaha Somaliya ku lugta leh ayaa warbixin uu soo saray ku sheegay in ay gabi ahaanba fashilantay dowlada Somaliya oo aysan Somaliya maanta ka jirin siyaasad degan oo meel loo raaco leh, halka dhinaca kale wasiiradii qurbaha ka tagay dib ugu soo laabanayaan guryahoodii iyagoo dhaleeceysan maadaama ay iyaga iyo Farmaajo ka danbeeyeen in aysan wadanka doorasho ka dhicin hanaanka dowlad goboleedyadana in la xoojiyo iska indho tireen si wadanka looga saaro xiliga Kumeel gaarka oo ay qalalaasahan siyaasadeed ee dalka iyo dadka ku habsaday sabaab u ahaayeen.
Marka warbixinta uu soo saaray Mareykanka laga soo tago wadanka waxaa maanta heerka uu joogo gaarsiiyey wasiiradii qurbaha ka tagay oo xiligii munaasibka ahaa mushkilada iska indho tiray sida.
1- Farmaajo iyo xukumadii uu garwadeenka ka ahaa waxey diideen nidaamkii federal sysytemka ee lagu xoojinayey dowlad goboleedyada si dowladan 4KM fashisa dalka intiisa kale loogu balaariyo.
2- Waxey ku mashquuleen loolan iyaga ku kooban halkii looga fadhiyey waxqabad muuqda waxeyna sidii kuwii ka horeeyey ka bixi wayeen diyaarad raacid iyo booqasho qoys.
3-Iyagoo aqoonyahano ah waxey ogolaadeen iney wax ku noqdaan nidaamkii qaldanaa ee 4.5 halkii ay iyaga hormuud u noqon lahaayeen in qodobkaasi laga saaro siyaasada Somaliya si iyadoon qofka la dhaheyn waa reer hebel si saaxiibtinimo ah isku siiyaan xilka wasaaradaha maadama hadabo ay sidey isku yaqaanaan isku soo xushaan.
4- Iyagoo ku yimid 4.5 ayey familadii ay ka dhasheen iska indho tirayaan taladooda iyagoo isku heysta iney meesha u joogaan dano qaran, taasi oo aaqrikii keentay heerka ay maanta ka joogaan siyaasada Somaliya.
5- Qaar ka tirsanaa wasiiradii Farmaajo intooda badan waxaa leyska yiri oo kaliya wasiirkaasi waxuu ka soo jeedaa reer hebel qaarkoodna xilalka lagu siinayey magac qabiilkooda iskaba daaye degaanka ay xilka ku helayeen waligood ma tagin taasi oo keentay ineysanba wax wada shaqeyn ah dhax marin iyaga iyo shacabka amaba qabiilada ay ka soo jeedaan marka laga reebo shaqsiyaad meelaha ay Somalida iskugu timaado ka xayeysiiya iyaga oo shacabka qalda iyagoo markaasi u tusinaya iney wadanka maanta hogaaminayaan aqoonyahano qurbaha ka tagay.
6- Dhibaatada ay wadanka la tageen kooxdii qurbaha ka tagtay waxey aheyd iney dhamaantood ahaayeen amaba ka tirsanaayeen ururka Islaaxul Islaamiya. shacabka Somaliyeed waxaanu u sheegeynaa hadaad aragtaan qof huwan magac urur diimeed ma ahan mid ay talada ka godo isaga arintiisane wey dhaaftay Somalinimo oo aduun kale ayuu ku xiran yahay marka kooxdaan isla weynida xad dhaafka aheyd halkaasi ayey ka keeneen waxey ahaayeen kuwo talo iyo tusaaleba ay kala dhaxeysay Islaaxa aduunka ku nool.
Sidoo kale C/wali oo ah aqoonyahan Somaliyeed waxuu garan waayey si fowdada looga baxo inuu shaqada iskaka tago hormuudna u noqodo sidii wadanka looga saari lahaa nidaamka TFGda amaba kumeel gaarka oo ah midka dalka iyo dadka Somaliyeed la haray.
Ugu danbeyn siyaasada Somaliya maanta waxaa ka bad baadi doona oo taariikh ka tagi doona cidkasta oo wadanka ka saarta xiliga kumeel gaarka ah walina lama hayo koox arintaas u taagan hadii aysan imaan doonin waxii hada ka danbeeya.
La soco qaabkii ay u fashilmeen wasiiradii Farmaajo xog aruurin badan kedib.
· admin on July 20 2011 11:35:56 · 0 Comments · 2376 Reads ·
14,667,227 unique visits